News - Gịnị bụ uru na ọghọm nke PLA na PET ihe karama na-ejuputa ụlọ ọrụ?
Igwe Na-ejuputa Mmiri
Igwe mmiri na-ejuputa mmiri
Igwe na-egbuke egbuke mmiri
Igwe karama mmiri na-ejuputa igwe
Obere PET karama Mmiri Na-ejuputa igwe
3-5L Mmiri Na-ejuputa Igwe
5 Galọn Na-ejuputa Igwe
Igwe na-ejuputa igwe
carbonated adụ ihe ọ fillingụ fillingụ ndochi igwe
Igwe anaghị a fillingụ ihe ọ fillingụ fillingụ na-ejuputa igwe
Igwe ihe ọ drinkụ drinkụ na-a drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ
Ihe ọ Hotụ Hotụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
PET ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ bottleụ bottleụ karama
Mmanya Mmanya Mmanya Na-ejuputa Igwe
Glass karama Beer Na-ejuputa igwe
Igwe karama mmanya na-ejuputa ahihia
Mmanụ ndochi igwe Line
Mmanụ flling igwe akara
Mkpa igwe na-ejuputa mmanụ
Ọgwụgwọ mmiri & Pasteurizer
usoro ọgwụgwọ mmiri
Pasteurizer & Sterilizer
Igwe njuputa nri
Mmanụ a Fụ na-ejuputa igwe
Ngosiputa Ngwa Ngosiputa Ngwa
Ncha ntutu ndochi igwe
Chemical Liquid Cup na-ejuputa igwe
Akpaaka Linear Capping Machine
Akpaka Cap Loader Machine
Bottle ihennyapade Labeler HAY Series
Top Side ihennyapade Label Machine HAP Series
N'ihu na azụ Side Labeler nwere Series
Idozi ọkwa ihennyapade Labeler HDY Series
Kwụ ihennyapade Labeler HA Series
Nka na ụzụ Nduzi
Kedu uru na ọghọm nke PLA na PET ihe karama na-ejuputa ụlọ ọrụ?
Dabere na mbipụta nke ahịhịa nkewapụrụ, ọnụ ahịa na nchedo gburugburu ebe obibi, PA karama bụ isi ihe na ụlọ ọrụ ihe ọ beụverageụ?
Kemgbe July 1, 2019, Shanghai, China emejuputala nke kachasi nkewa. Na mbido, enwere onye n’akụkụ ahihia nke nyere aka ma duzie nkewa nkewa, kwesiri ikewapu ndi ozo, mkpofu ahihia, ahihia ndi ozo, ihe ojoo
Site na mbipụta nke ahịhịa ahịhịa nkewapụrụ, ebee ka karama ihe ọ beụ differentụ dị iche iche ga-aga? Si kacha ekpo ọkụ ugbu ajụjụ na azịza na quora, Gịnị mere na ha anaghị eme plastik mmiri / soda / mmiri ara ehi karama si PLA?
Dị ka anyị si mara, a na-eji karama mmanya emere PITA, PP, PE, PC. Bottlesfọdụ karama mmiri ịnweta mmiri, n'okpuru ọnọdụ dị elu na ọnọdụ acidic, dị ka mmiri ọkụ, acid, prọl plum, mmanya, wdg, nwere ike ịnwe mmiri ọgwụ. A na-ejikarị karama mmiri eme ihe n'otu oge. Recyclable ma ọ bụghị degradble ọtụtụ narị afọ.
A ga-emebi karama PLA na afọ 50 n'okpuru ọnọdụ eke. Nkume Crystalline, naanị ihe enwere ike iji ya mee ihe na ngwa ngwa nri, chọrọ ịmịpụta mmiri (hydrolysis) iji mee ka usoro ahụ ghara ịdị. A gbanwere ya na CO2 na mmiri na-ahapụ ihe dịka 20% nke ibu mbụ, mana ihe na-esite na ya na-eweta usoro na compost na enweghị nri. Nke a bụ ihe mkpofu n'ụzọ dị irè, karịa ịmegharị.
A na-agụta site na imepụta 500,000, ụgwọ nke preform gram 21 bụ 0.041 US dollars.
Ọnụ nke preform 21-gram PLA bụ $ 0,182. Ego abuo di iche na ihe 4.5. N’iche ihu ọdịiche dị otú ahụ na-efu ihe, olee ndị na-emepụta ihe ọ beụ beụ ole ga-azụtali ya?
Dị ka onye na-emepụta ihe ọ fillingụverageụ na-ejupụta ihe ọ beụverageụ, Higee Machinery （Shanghai） Co., LTD nwere ike inye usoro dum site na ị bottleụ kalama, ịsacha karama na-edebanye aha na ịdebanye aha ruo nkwakọ ngwaahịa ikpeazụ. preform niile ụdị udi karama. Kalama ahụ gaa 3 na 1 monoblock saa na-ejuputa igwe. Ngwunye PLA ọ dị mma maka usoro niile na-agba ọsọ na 3 na 1 kalama na-ejuputa igwe?
Kedu uru na ọghọm nke PLA na PET ihe karama na-ejuputa ụlọ ọrụ? Kedu mba ndị ọzọ na-eji karama PLA eme ihe? Nabata ịkọrọ gị echiche gị site na email admin@higeemachine.com na ekwentị +86 18616918471. Ka anyị tụlee ọnụ.
Post oge: Dec-17-2019